Madaxwaynayaasha oo wali ku heshiin shirka wadatashiga ee Muqdisho – Radio Daljir
Madaxwaynayaasha oo wali ku heshiin shirka wadatashiga ee Muqdisho
Noofember 1, 2017 8:35 b 0
Shirka Madasha Wadatashiga madaxda dowladda iyo Dowlad goboleedyada ayaa weli ka socda Magaalada Muqdisho iyada oo waqtigii loogu talo galay in la soo gaba gabeeyo uu dhaafay maadaama aysan jirin wax rasmi ah oo isku afgartay.
Madaxda oo shirkoodu uu qaatay waqti dheer ayaa haatan ka doodaya arrinta keentay khilaafka Madaxda labada dhinac ee Go’aanka gaarista xiisada u dhaxeysa Wadamada Khaliijka.
Wararka laga helayo shirka ayaa sgheegaya in Madaxda ay jiraan waxyaabo ay isku afgarteen oo ay ka mid yihiin in siwadajir ah ula dagaalamaan Al-Shabaab iyo ka Shaqeynta dhanka Amniga.
Qodobada inta badan ay isku khilaafsan yihiin ay salka ku haya arimaha Dastuurka taas oo keentay in hoggaamiyayaasha Madaxda Dowlad goboleedyada ay dalbadaan in uu shirka ka qeybgalo Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ah Wasiirka Dastuurka Soomaaliya.
Arrimaha ugu weyn ee Shacabku sugayaan ayaa ah xalka gaarista khilaafka u dhaxeeya Madaxda Qaranka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada taas oo ka dhalatay kadib markii khilaafka Wadamada Carabta ay dowladda Soomaaliya dhex dhexaad ka noqotay halka Madaxda Dowlad Goboleedyada ay taageereen Xulufada Sacuudiga.
Shirkaan oo ah mid xasaasi ah ayaa Maanta waxaa la filayaa in uu shir gudoomiyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si waqtigi dhow uu shirkaas Warmurtiyeed looga soo saaro.
Odyaaal iyo siyaasiyiin ku shiray Bosaso oo ka hadlay hakadka kujira shaqada dekedda Bosaso(dhegayso)
Dibadbax kadhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo kadhacay Bosaso